အကြီးစားသံမဏိဝယ်ယူစီမံကိန်းထုတ်လုပ်သူများ | တရုတ်အကြီးစားသံမဏိဝယ်ယူစီမံကိန်းပေးသွင်းသူများ & စက်ရုံ
စျေးပေါကြီးသော span သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး စက်ရုံလက်ခဏာများ 1. ကျယ်ပြန့်သောသက်တမ်းရှိသည်၊ တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်အမျိုးစုံအကျယ်ရှိသည့်အပြင်အလယ်အလတ်ကော်လံမရှိဘဲ ၃၆ မီတာအကွာအဝေးအများဆုံးအကွာအဝေးရှိနိုင်သည်။ ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီယူနစ်စျေးနှုန်းမှာ USD 29 မှ USD65 အထိရှိပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသောကြောင့် FOB သည်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ 3. အမြန်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း ၄။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်သက်တမ်းရှိခြင်း။ 5. သိုလှောင်ရုံများသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ, Ar ...
အနိမ့်ကုန်ကျ prefab အအေးသိုလှောင်မှုစီမံကိန်း Prefabricated အဆောက်အ ဦး သံမဏိအလုပ်ရုံဖွဲ့စည်းပုံအလုပ်ရုံဂိုဒေါင်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဓိကဖွဲ့စည်းပုံဂဟေဆော်သောအပိုင်းသို့မဟုတ် Hot rolled H အပိုင်းသံမဏိ၊ သိုးမွှေး၊ Fiber Glass အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပြား Tie bar Q235 သံမဏိတိုင် Tube Brace Q235 ထောင့်သံမဏိ၊ ဘားပတ်သို့မဟုတ်သံမဏိပိုက်ဒူး Brace Q235 ထောင့်သံမဏိခေါင်မိုးပြောင်အရောင်သံမဏိစာရွက် ...
အကြီးစားသံမဏိကိုယ်ထည်သည်အကြမ်းခံ။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်တည်ဆောက်မှုပုံစံဖြစ်ပြီးအဆောက်အအုံအမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးတွင်သုံးနိုင်သည်။ ဥပမာ - မိုးသည်းထန်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းအဆောက်အအုံများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများပံ့ပိုးမှုစနစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ထပ်ဆင့်အဆောက်အ ဦး များနှင့်တံတားများ။ သံမဏိများ၏စွမ်းအားမြင့်မားသောကြောင့်သံမဏိကိုယ်ထည်ပုံစံသည်အလွန်စိတ်ချရသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်အရလေးလံသောသံမဏိကိုယ်ထည်ကိုသင့်စီမံကိန်း၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်တိကျသောအရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္withာန်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လေးလံသောသံမဏိ buiding PR ...
သြစတြေးလျသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အအုံအအေးသိုလှောင်ခြင်းစီမံကိန်းကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ပုံမှန်သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး များမှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ သင်္ဘောများ၊ စက်ရုံအဆောက်အအုံများ၊ စီးပွားရေးစင်တာများ၊ ရုံးခန်းနှင့်လူနေအိမ်အဆောက်အ ဦး များ၊ အားကစားနှင့်လေဆိပ်အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းနှင့်ရေအတွက်အဓိကသံမဏိကိုယ်ထည်များဖြစ်သည်။ ကူးနှင့်လူကူးတံတားများ။ Classic Group သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအင်ဂျင်နီယာမိတ်ဖက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။